Tsindron'antsy an-dalambe :: Tovolahy namoy ny ainy teny am-piarahana tamin'ny olon-tiany • AoRaha
Nitrangana vono olona mahatsiravina, teny Andranomena, manakaiky ny fiantsonan’ny fiara mpitatitra amin’ny zotra 194, afak’omaly alina.
Tovolahy sy ny olon-tiany niaraka no niharan’ny herisetra tampoka.
Lehilahy iray no nanindrona antsy avy hatrany an’iry tovolahy voalohany iry. Namoy ny ainy izy na dia noezahina nialana nenina tamin’ny toeram-pitsaboana tsy miankina iray, teny Ambohibao aza. Teo amin’ny vozony ilany no niditra ny antsy. Ahiana ho vokatry ny fahaverezan-dra be loatra no nitarika tamin’ny fahafatesany.
“Manodidina ny tamin’ ny 7 ora hariva no nitrangan’ ity zava-doza ity, tsy lavitra ny orinasa lehibe iray eny Andranomena. Efa nianjera tamin’ny tany ilay lehilahy no nifamonjen’ireo olona sendra nandalo. Tombanana ho avy amin’ny fifamaliana teo amin’io lehilahy voatsindron’ antsy io sy ny lehilahy iray hafa nahavanon-doza no niafara tamin’izao famoizana aina izao. Nitsoaka avy hatrany ilay nanindrona antsy rehefa nahita fa voa mafy ilay mpifanandrina taminy”, araka ny fitantaran’ireo olona teo amin’ny manodidina izay nahita ny zava-niseho.
Mpiambina ao amin’ny orinasa lehibe iray mpivarotra fiara vaovao, eny Andraharo, io tovolahy namoy ny ainy io, araka ny loharanom-baovao. 34 taona izy ary monina eny Andranomanalina. Ny tale mpitantana ny mpiasa ao amin’ilay orinasa no fantatra fa nampandre ny Zandarimaria, eny Betongolo, taorian’ny zava-nisy. Nidina nijery ifotony teny an-toerana ireo zandary taorian’izay.
Mbola hita teny an-toerana ny vehivavy niaraka tamin’ity lehilahy namoy ny ainy ity ka nosamborin’ny zandary avy hatrany.
Voatazona eny amin’ny tobin’ny Zandarimaria eny Betongolo izy, omaly.
Araka ny loharanom-baovao akaiky ny mpanao famotorana dia karohin’izy ireo ny lehilahy iray monina eny Ampefiloha, izay ahiana ho nahavanon-doza tamin’ izao vono olona izao. Ny vokatry ny famotorana ihany no hahafantarana ny marina rehefa hita io lehilahy io.
Fampijaliana sy fitifirana :: Miaramila telo lahy notorian’ ny lietnà lehibeny
Fanafihana tany Maintirano :: Matin’ny tompon-trano ny iray tamin’ireo olon-dratsy